Inona ny fampisehoana LED avo lenta avo lenta?
Tsy ny LED LED ivelany rehetra dia noforonina mitovy. Noho ny safidy sy ny endri-javatra maro be misy, ny fifidianana ny mety indrindra dia mety ho fanamby. Ny LED Display sasany dia manasongadina ny haavon'ny kalitao raha ny hafa kosa mifantoka amin'ny fanomezana fampisehoana LED ivelany lafo vidy indrindra.
Iza amin'ireo no tianao haleha?
Mampiseho ny vidiny ambany indrindra?
Ireo mpanamboatra izay mivarotra azy ireo amin'ny vidiny ihany no mazàna ireo orinasa tokony hialana. Ireo karazana orinasa ireo dia tonga ary mandeha haingana. Ireo mpanamboatra izay manana ny vokatra mora indrindra dia matetika no manapaka zoro maro raha ny karazana singa anatiny ampiasainy ho an'ny fampisehoana LED. Izany dia mitarika vokatra mora vidy ambany. Mba hanaronana ireo orinasa ambany kalitao dia mampiasa teny famaritana lafo vidy hilazana sy hivarotra ny vokatr'izy ireo.
Matetika mpamokatra seho LED miaraka amin'ny vidiny mora indrindra:
Haavo ambany noho ny famirapiratana –NITS 4000 fotsiny
Sarotra ampiasaina rindrambaiko fandefasan-kafatra - tsy fahampian'ny fanohanan & sarotra
Fotoana mitarika ela amin'ny ampahany sy fanohanana
Tsy fahampian'ny fanamarinana kalitao- tsy UL List, cUL Listed na CE List
Warranty ratsy - fiantohana kely indrindra mandritra ny 2 taona
Fizarana Pixel na fanapahan-kevitra virtoaly - rindrambaiko milaza ho maranitra ny sary aseho fa ny fotoana maharitra kosa dia hamorona olana maro amin'ny mazava sy ny fiainana ny maody LED.
Inona no fampisehoana LED avo lenta?
Amin'ny fanaovana ny marina sy mialoha ny momba ny vokatrao dia hitombo ny orinasanao ary hatoky ny kalitaonao ny mpanjifa.
Rehefa mikaroka fampisehoana LED kalitao sy mpanamboatra dia jereo foana raha toa ka:
Fitsapana ny mari-pana sy ny toetrandro - ireo singa nisaina ho an'ny mari-pahaizana -22 degre hatramin'ny mari-pahaizana 62 degre dia midika fa mampiasa singa anatiny ao anaty indostrialy ny mpanamboatra. Izy io dia mitovy amin'ny fahombiazana azo antoka an-taonany na dia amin'ny tontolo iainana mafy indrindra aza.
Mandalo fitsapana henjana - alohan'ny sambo LED dia tokony hosedraina izy ireo ary handalo ity fitsapana manaraka ity: fahamendrehana Signal, Start Start, Radiated Emissions, Thermal, Impact, Flame, Rain, Immunity, ary Surge Protection.
Fitaovana fanampiana sy fiofanana maimaim-poana - tranomboky misy horonan-tsary fanofanana rindrambaiko efa voarindra sy fampiofanana rindrambaiko mivantana maimaimpoana.
Kalitaon'ny famokarana - orinasa mpanamboatra izay ISO 9001: 2008 voamarina dia famantarana lehibe amin'ny orinasa matanjaka amin'ny orinasa. Io karazana fanamarinana io dia mitovy amin'ny kalitao.
Warranty - antoka roa taona farany ambany. Izay orinasa misahana ny fiantohana azy manokana ary tsy mampiasa orinasa fiantohana fahatelo dia midika fa mino ny kalitaon'ny vokatra amboariny ny mpanamboatra.